Semalt: Kusetshenziswa Idatha Ehlelekile Yekhwalithi Yokuthola Ithrafikhi Engaphezulu Kuwebhusayithi Yakho
Wake wadlulela egumbini elihlakazekile ufuna i-sock? Cha ukubheja kwakungelula. Umbono ofanayo uyasebenza kuwebhusayithi.
Ukuthola ulwazi ku-inthanethi kulula kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi kakhulu, futhi yingakho. Uma unikeza iwebhusayithi yakho kuSemalt, akungabazeki ukuthi izophuma phezulu. Lokhu kungenxa yokuthi siyakwazi ukubeka izici, umbhalo nezithombe lapho kufanele. Njengabakhi, sichithe iminyaka sisebenza nezinto ezidingwa yiwebhusayithi yakho futhi sesithole ukuthi singayisebenzisa kanjani iwebhusayithi yethu ukuze ithole leyo miphumela emnandi.
Kungakho yonke iwebhusayithi kufanele ibhaliswe ne-Semalt kepha ngoba lokho akunakwenzeka, sikhawulela iqoqo lethu ekuthembiseni amawebhusayithi afana neyakho. Njengamaphrofeshinali, sinamathuluzi namathalente wokuhlelela iwebhusayithi yakho enhle kakhulu ukuthi izohlala ibonakala lapho amagama wakho okhiye eseshwa kodwa anele ngalokho.
Iyini Idatha Ehlelwe Ngekhwalithi?
Lokhu ukuhlelwa kokuqukethwe kwiwebhusayithi kahle. I-Semalt isiza iwebhusayithi yakho ngokubeka izinto ezifanele ezindaweni ezifanele. Lokhu kunika amandla izivakashi zakho nabakhandi benjini yokusesha ukuzulazula ngokukhululeka. Lesi sici kungaba yinto yokugcina oyilahlekile lapho uzama ukwenza ukuthi iwebhusayithi yakho ibekwe phakathi. Kodwa noma ngabe aphakeme kangakanani amagama akho okhiye we-SEO, ngeke kube lula ukuthola ukuthi iwebhusayithi yakho ayihlelwanga kahle.
Eminyakeni edlule, uSemalt usebenze namakhasimende amaningi namawebhusayithi. Ngale minyaka, sekuyinto ejwayelekile ukuthola amawebhusayithi enza ukusetshenziswa okumangalisayo kwamagama asemqoka e-SEO. Kepha la mawebhusayithi awatholi noma yiliphi ithrafikhi noma ukuchofoza, okuba yinkinga enkulu kubanikazi bawo. Lapho ususa imibala yewebhusayithi, izitayela zefonti, namahluzo, konke okusalayo isakhiwo.
Ingqondo yethu yabantu ibheka ukulingana, iphethini, ukulandelana kokufunda noma ukuqonda. Lokhu kusho ukuthi sinesifiso esikhulu ngokulandelana kwezingu-1,2,3,4 lapho sifunda amanani ethu ukuthi isethulo esisabalale salezi zinombolo njenge-10,000, 100, 3, 6. Izingqondo zethu zikhetha ukuthola izinto lapho kulindeleke yiba.
Abasebenzisi abaku-inthanethi bancamela ukuqala ukufunda i-athikili noma okuqukethwe kuwebhu kusuka kulwazi oluyinkimbinkimbi oluye phansi kuye kolukhuni kakhulu. Ngokuvamile, uma uqala kusuka kokuyinkimbinkimbi kakhulu, abafundi balahlekelwa inzalo futhi bathuthela kuwebhusayithi engcono.
Njengoba wazi, izinqubomgomo zakwa-Google zenzelwe ukufanela abasebenzisi kuqala. Lokhu kusho ukuthi iwebhusayithi yakho iyathandeka kakhulu kumfundi, yilapho ikhanga kakhulu injini yokusesha yakwaGoogle. I-algorithm yakwaGoogle iqoqa imininingwane kusuka kusesho futhi isebenzisa le datha ukukala isayithi lakho. Kusebenza kanjani ukuthi uma umsebenzisi ethola isiza sakho, i-SERP noma izinjini zakho zokucinga ziqapha ukuthi laba bantu bahlala isikhathi eside kangakanani kusayithi. Iwebhusayithi eyakhiwe kahle yenza isivakashi ukuthi sihlale isikhathi eside endaweni lapho isayithi elakhiwe ngendlela engeyinhle senza umfundi ashiye.
Ezinye izinto, njengezinga lokugoqa, nazo zibalulekile uma ucubungula ukwakheka kwesayithi. Isakhiwo esihle sesayithi singanciphisa inani lokuphaphama, nesikhathi sokufunda somfundi wakho. Lapho uhlanganisa lezi zinto ezimbili, iwebhusayithi yakho ibekwa ngokuzenzakalela.
Isakhiwo esihle sendawo sinikeza isayithi lakho izixhumanisi ezingcono zesiza.
Izixhumanisi zesayithi ziyindlela yohlu ku-SERP ekhombisa ikhasi eliyisihloko sakho kanye nezixhumanisi ezimbalwa zangaphakathi. Lezi zixhumanisi zesayithi ziyigolide uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwe-SEO. Benza iwebhusayithi yakho ukuthi ifundwe kalula ngumsebenzisi wakho. Ikhomba umfundi imininingwane efanelekile kuwebhusayithi yakho, ekhulisa idumela lomkhiqizo wakho, futhi abasebenzisi bayathemba okuqukethwe okulethile. Zonke lezi zisiza iwebhusayithi yakho ukuba ibe nesikhundla esingcono ku-SERP.
Uzithola kanjani lezi zixhumanisi zesayithi?
Awukwazi ukuya kukhonsoli yokusesha yakwaGoogle bese ugcwalisa ifomu ukuze uthole izixhumanisi zesayithi. Kalula nje, awukwazi ukucela isixhumanisi sendawo. Lezi zixhumanisi zinikezwa ngokuzenzakalela yi-algorithm ye-Google lapho isakhiwo sakho sesayithi siba ngokwanele ukuba ufaneleke. Futhi ngaphandle kwalezi zixhumanisi zesayithi, iwebhusayithi yakho ingahle ihliswe ukwehliswa kwethrafikhi yakho eqondisiwe, i-CTR ephakeme, kanye nokuguqulwa okuguqukayo.
Izinjini zokusesha zidinga izakhiwo ezingcono zesayithi zokukhasa kangcono.
Abakhandi bewebhu abanjengo-Googlebot bakhasa kumawebhusayithi ngokuya ngesakhiwo sabo. Iwebhusayithi eyakhiwe kahle yenza kube lula futhi kusheshe ukuhamba futhi uthole amagama angukhiye owafakile. Inhloso yale WebCrawler ukukhombisa okuqukethwe ukubuyisela ukuhlaziywa kwayo njengemiphumela yosesho.
Kufanele wazi ukuthi okuqukethwe kuwebhusayithi yakho akwaziwa ngokuzenzakalela ku-Google. Lawa magaqa awatholanga nje umphumela abakhetha ukuwubonisa lapho kuseshwa igama elingukhiye. IGoogle ngokwayo iphumele obala ukuthi kungenzeka ukuthi abatholanga amanye amakhasi noma ama-URL namuhla. Lokhu kungenxa yokuthi abatholakalanga iWebCrawler yakwaGoogle. Ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho kanye namakhasi e-web awahlupheki ngale ndlela efanayo, kufanele wenze iwebhusayithi yakho ibe lula ukufinyelela kuyo, ukukhasa, kanye nenkomba ngabakwaWebCrawler.
Isakhiwo esihle sendawo siyisisekelo sokwenza i-SEO ibe ngcono
Ekugcineni, yeka ukuthi ilunge kangakanani i-SEO yakho futhi ngokuyinhloko ichazwe ngokuphelele ngesakhiwo sesayithi lakho. Ochwepheshe abaningi bazophikisana nokuthi ngaphandle kwesakhiwo esihle sesayithi, i-SEO yakho ayisoze yaphumelela. Isakhiwo sendawo siyisisekelo se-SEO yakho, futhi njenganoma yisiphi isakhiwo, isisekelo kumele siqine. Isisekelo esibuthakathaka noma esingakhekile kahle sisho ukuthi isakhiwo sakho sizodilika. Ekugcineni, kuyindaba yesikhathi kuphela. Ngokufanayo, iwebhusayithi yakho ekugcineni izokwehluleka ngaphandle kwesakhiwo esifanele.
Nazi izinyathelo zokwakha ukwakheka kwesayithi elifanele
Thuthukisa isikhundla sendawo ngaphambi kokuthuthukisa iwebhusayithi yakho
Uma uqala iwebhusayithi entsha, ungahlela ukuthi isayithi lizothatha luphi uhlobo ekuqaleni. Ngisho nangaphambi kokuba uqhubeke nokwakha amakhasi ku-CMS, kufanele uhlele ukuthi isiphi isakhiwo ongathanda ukuthi iwebhusayithi isithathe. Ungenza ukuhlela kuspredishithi, i-whiteboard, noma iphrosesa yamagama.
Imininingwane yakho kufanele ibe nobuphathi. Imininingwane ekhonjisiwe kufanele igeleze ngendlela enengqondo. Uma usuqedile, lobu bukhosi buzoba isakhiwo sakho sokuhambisa nokuhamba nge-URL, ngakho-ke zonke izinyathelo ezibalulekile noma ezibalulekile ohlose ukuzithatha zithinteka kulokho okwenzayo lapha.
Kunezici ezimbalwa zobuphathi obukhulu okufanele uzikhumbule.
Yenza izinhloso zakho zobuphathi zibe kunengqondo. Ungazami ukucabanga ngokweqile noma ukwenza inqubo ibe lukhuni.
Gcina inani lezigaba eziphambili phakathi kwezimbili nesikhombisa. Ngaphandle kokuthi uyi-webhusayithi yezitolo ye-eCommerce, awufuni ukuba nezigaba eziningi kakhulu. Kwenza iwebhusayithi yakho futhi, "imatasa."
Zama ukulinganisa inani lezigatshana ezisesigabeni ngasinye. Yize lokhu kungaphoqelekile impela, kodwa yinto abaklami bewebhu okufanele bazame futhi bayifinyelele. Isigaba esisodwa esikhulu akufanele sibe nezigatshana eziyishumi, kanti esinye sinezinhlanu kuphela. Kwenza iwebhusayithi ibukeke ingasebenzi.
Isakhiwo sakho se-URL kumele silandele indawo yakho yokuzula.
Esinye isakhiwo esibalulekile isakhiwo sakho se-URL. Uma wenze isinyathelo sokuqala kahle, lokhu akufanele kube yinkinga. I-URL yakho izophatha iwebhusayithi esemqoka, isigaba esisodwa esiyinhloko, ngaphambi kwesigaba esingezansi. Kufanele ibukeke njenge-SSaltalt.net/SEO/UsingQourseStructureDataToGetMoreClicks. Lesi sixhumanisi sihlela imininingwane ekhonjiswe ngokwesikhundla sayo.
Ukuzulazula kwesiza sakho kufanele kube ngefomethi ye-CSS noma ye-HTML.
Uma wenza iwebhusayithi, gcina ukufaka amakhodi elula. Kusetshenziswa ulimi lokufaka amakhodi ngokwengeziwe kwenza kube nzima kuma-WebCrawler's ukumboza isayithi lakho.
Sebenzisa isakhiwo esijulile sokuzulazula.
Lapho uthola ukuthi kuhamba kuphi, qaphela ukuthi ungazingcwaba izingcezu ezibaluleke kakhulu zewebhusayithi yakho zijule kakhulu ekuphathweni kwakho, amasayithi angajulile asebenza kangcono kakhulu kubo bobabili abakhandi bewebhu kanye nabafundi bakho.
Dala isakhiwo esihlanganayo sangaphakathi
Sithole izizathu ezintathu zokuthi kungani lo mkhakha ubalulekile ekwakhiweni kwewebhusayithi yakho. Nalu uhlu lokuthi kungani izixhumanisi zangaphakathi zibalulekile:
Vumela abasebenzisi ukuthi bazulazule iwebhusayithi
Basiza ekusunguleni iziqu eziphakeme zolwazi kuwebhusayithi.
Basiza ekusakazeni amandla osezingeni kuwebhusayithi yonke, bakunikeze isimo esingcono.
Ngayinye yalezi inegalelo ekwakheni iwebhusayithi efakwe kahle ngokuphelele.
Izixhumanisi ezingaphakathi azinjengoba isayensi ye-rocket. Kusho nje ukuthi uxhumanisa okuqukethwe noma ikhasi elilodwa kwiwebhusayithi yakho kokulandelayo. Lokhu kuxhumeka kwangaphakathi kufanele kuqondise umfundi wakho kumakhasi wesigaba ahlobene nekhasi lesigaba esikhulu.
Izixhumanisi zangaphakathi zitshela izinjini zokusesha ukuthi yimaphi amawebhusayithi abalulekile nokuthi ufika kanjani lapho.